Fahasalaman’ny reny sy ny zaza : Hisy vaksiny miaro amin’ny kitrotro -
AccueilSosialyFahasalaman’ny reny sy ny zaza : Hisy vaksiny miaro amin’ny kitrotro
20/10/2018 admintriatra Sosialy 0
Miditra amin’ny andiany faha-25 ny herinandron’ny fahasalamana ny reny sy ny zaza eto Madagasikara, izay hotanterahina amin’ny 22 hatramin’ny 26 oktobra ho avy izao, manerana ny 114 distrikan’ny fahasalamana. Lohahevitra ny hoe, “Ankohonana salama, antoky ny fampandrosoana ny firenena.”Any Mahajanga kosa no hanokafana ny hetsika amin’ny fomba ofisialy. Mandritra io herinandro io, hisy ny fizarana vitamina A ho an’ny ankizy 4 tapitrisa, eo anelan’ny 6 hatramin’ny 59 volana. Hisy koa ny fizarana ody kankana ho an’ny zaza 12 hatramin’ny 59 volana, maherin’ny 3 Tapitrisa. Hisy koa fitiliana tsy fanjariantsakafo eny anivon’ny distrika 54 anatin’ny faritra 20. Ankoatra ireo vaksiny efa fanao kosa, hampiavaka ity andiany faha-25 ity ny vakisiny miaro amin’ny kitrotro ho an’ny zaza 0 hatramin’ny 11 volana. Ho an’ny tanànan’Antananarivo sy ny manodidina indray kosa, hisy ny vaksiny miaro amin’ny kitrotro, hiadiana amin’ny lefakozatra sy ny tetanosy ho an’ireo zaza.
Vehivavy bevohoka maherin’ny 570 000 indray no omena ody kankana, ary manodidina ny 1 tapitrisa no hatao vakisiny miaro amin’ny tetanosy. Hisy koa ny fitiliana aretina VIH/ Sida. Mba ahafahana manatanteraka izany soa aman-tsara, mpisan’ny fahasalamana miisa 10 124 no ahetsika mandritra io herinandro io, manodidina ny 17 254 kosa ireo mpanentana ara-pahasalamana, ary 564 ireo mpanara-maso. Tanjona ny hanenana ny taha-pahafatesan’ny reny sy ny zaza. Hatreto 300 amin’ny 100 000 ireo reny mamoy ny ainy eo ampiterahana. Amin’ireo zaza 1000 teraka indray dia 17 ny maty ary 31 amin’ny 1000 ireo latsaka ny 5 taona. Tao anatin’ny 10 taona dia tsy nihetsika io taha io. Na dia izany aza, maro ireo ezaka hatao hampirisihana sy hampitomboana ny fandraisan’anjaran’ireo mponina hanao vaksiny, hoy ny minisitry ny Fahasalamam-bahoaka, Pr Rantomalala Yöel.
Manao tohivakana ny firenena manaiky ny maha ara-dalàna an’izao fitondrana misy izao ka mandefa ny solontenany hiasa eto Madagasikara. Omaly dia ambasadaoro telo avy hatrany no noraisin’ny Filoham-pirenena, Rajaonarimampianina Hery, nanatitra ny taratasy manamarika ny ...Tohiny